Archive du 20170512
Fananganana ny fitsarana ambony Matahotra mafy i Rajaonarimampianina
12 volana taorian�ny nandraisan�ny filohan�ny Repoblika fahefana no tokony ho nananganana ny Fitsarana ambony na ny fitsarana ambony na HCJ (Haute Cour de Justice).
Tsy raikitra ny fitsipaham-pitokisana Fahazoana 4x4 no setriny ?
Lany tamin�ny alalan�ny tsangan-tanana teny Tsimbazaza omaly ny fandaharam-potoana hatramin�ny 6 jona izao.
RMTF ho eny amin�ny kianja 13 mey Manantena hahazo olona
Nampahafantarina tetsy amin�ny toerana iray etsy Andravoahangy ny fikambanana politika maromaro miara-miasa amin�ilay hetsika rodoben�ny tia tanindrazana ho amin�ny fanorenana (RMTF)
Ranaivoson Jean D�sir� Tsy mbola ho kandid� amin�ny 2018
Efa nitaky ny hamoahana mangarahara ny datin�ireo fifidianana hatao amin�ny taona 2018 ny antoko Marina ary efa nanome tolo-kevitra ny amin�ny hanatanterahana ny fifidianana.
Taratasin�i Jean Izahay koa hitondra
Miarahaba ry Jean a ! Tena ohatry ny nahafinaritra be ahy ny tenin�ilay namana omaly maraina izay hoe vonona ny handrombaka ny fahefana eny am-pelantananareo, hono, ry zareo.
Mpisolovava an�i Fernand Cello �Tsy resaka taratasim-bola hosoka io�
Resaka halatra taratasim-bola hosoka mitentina 4 tapitrisa ariary efa tamin�ny taona 2015 nitorian�i Niry Maherilahy mpandraharaha, mpitantana orinasa mpamokatra jiro any Ilakaka no nampidoboka am-ponja vonjimaika an�i Fernand Cello vonjimaika.
Fifidianana 2018 Efa nahangom-bola be Rajoelina ?
Na mangina sy tsy re tsaika firy aza i Andry Rajoelina, dia voalaza fa miketrika mafy amin�ny fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena 2018. Ny resaka ara-bola no tena niomanany sy hiomanany fatratra, raha ny loharanom-baovao iray.
Araben�ny fahaleovantena Analakely Lasa toerana fitobian�ny 4-Mi
Mbola hitoeran�ny disadisa ara-politika mandraka ankehitriny ny fampiasana ny kianjan�ny 13 mey 72 noho ny tahotr�ireo mpitondra nifandimby ny mety hiverenan�ny fanonganam-panjakana manomboka eo aminy.
Airtel Fun Quizz 23 Lasan-dRaholivololona Andriatsilaizina ilay fiara �Ford Fiesta�
Nifarana tanteraka ilay andiany faha-23 tamin�ilay lalao Fun quizz nokarakarain�ny Airtel Madagascar nanomboka ny volana desambra taona 2016 lasa teo.
Lehilahy miady amin�ny herisetra Tafatsangana ny Men engage
Tambajotra hifaneraseran�ireo lehilahy vonona ny hiady amin�ny herisetra ny Men engage.
Miantehitra amin�ny hazo boboka !
Ekena fa tsy ny mpitondra fanjakana isan-tsokajiny no handrotsa-bary any am-bilanin�ny tsirairay, saingy mba tokony ho hita ihany ny fandraisan�andraikitra na tsy mivantana aza kanefa tsy izay no miseho, fa dia ny ho any am-paosy ihany, ho any am-paosy hatrany no masaka an-tsain�ny mpitondra sy ny mpanao politika.
BORIBORINTANY FAHADIMY Nodiovina ny tan�na
Nanatanteraka fanadiovan-tan�na ny Boriborintany fahadimy. Niainga teny amin�ny Rond point Alarobia, hatreny amin�ny gara ary nitohy hatrany Ivandry.
Rano fisotro madio Efa misy ny fitaovana hahafahana mikarakara ireo tsy azo antoka
50 % raha betsaka indrindra ireo Malagasy misitraka rano fisotro madio eto amintsika.